पत्र छाप्ने - Print Peppermint
लेटरप्रेस विवाह निमन्त्रणा
लेटरप्रेस मितिहरू बचत गर्नुहोस्
पार्टी र घटनाक्रम
एक नमूना प्राप्त गर्नुहोस्
लेटरप्रेस प्रिन्टिङ। लालित्य को प्रतीक।
आफ्नो ब्रान्डको लागि सुन्दर पुरानो-विश्व debossed प्रिन्टिङको साथ, अनुकूलनमा टोन सेट गर्नुहोस् Pantone PMS रङहरू, विलासी रूपमा नरम तर व्यापक रूपमा 100% कपासको कागजमा छापिएको।
घर / लेटरप्रेस मुद्रण
लेटरप्रेस बिजनेस कार्ड
पत्रपत्रिका कागज नमूना
लेटरप्रेस ह्याङ्ग ट्यागहरू
द्वारा आश्चर्यजनक लेटरप्रेस मुद्रण सेवाहरू Print Peppermint
डिजाइन र प्रिन्टिङ सेवाहरू वर्षौंको दौडान लामो बाटोमा आएका छन्, तर क्लासिक्सको बारेमा भन्नको लागि केहि छ।
यदि तपाइँ तपाइँको प्रिन्टहरूमा शैली, सुन्दरता र अपीलको अतिरिक्त तह बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, लेटरप्रेस प्रिन्टिङ भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्। यो विधि पहिलो पटक 15 औं शताब्दीमा देखा पर्‍यो र यो आज पनि लोकप्रिय छनोट हो, र राम्रो कारणहरूको लागि।
यदि तपाईं अब एक भरपर्दो मुद्रण साझेदार खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई उत्कृष्ट लेटरप्रेस मुद्रण सेवाहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्छ, हामी Print Peppermint मद्दत गर्न खुसी छन्। हामी लेटरप्रेस मुद्रित सामग्रीहरूको एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछौं जसले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसायमा प्रभाव पार्न मद्दत गर्न सक्छ, विवाहका अतिथिहरूलाई आश्चर्यचकित गर्न, स्टेशनरी, र थप कुराहरू!
हामी तपाईंलाई हाम्रो लेटरप्रेस प्रिन्टिङको सूची जाँच गर्न प्रोत्साहन गर्छौं हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् आफ्नो अर्डर मा कस्टम उद्धरण प्राप्त गर्न को लागी!
Letterpress मुद्रण के हो?
लेटरप्रेस मुद्रण एक प्रकारको राहत मुद्रण हो जसमा कागजको टुक्रामा मसीले ढाकिएको माथिको सतह थिच्नु समावेश छ।
मसी लागू गरिसकेपछि, कागजमा भारी छाप छोडिन्छ जुन तपाईले कागजको माध्यमबाट हात चलाउँदा महसुस गर्न सकिन्छ। यसले न केवल एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव सिर्जना गर्दछ तर एक रणनीतिक अनुभव पनि।
लेटरप्रेस प्रिन्टिङ वा यसको प्रारम्भिक रूप कहिले सिर्जना भयो भन्ने बारे केही बहस छ। केही विद्वानहरूले 1000 को दशकमा चीनमा यस शैलीको संकेत फेला पारेका छन्, जबकि अरूले 1440 मा यसको सिर्जनाको लागि जोहानेस गुटेनबर्गलाई श्रेय दिन्छन्।
मुद्रणको यो विधि कहिले सुरु भयो, यो स्पष्ट छ कि मुद्रणको लागि अद्वितीय दृष्टिकोणले यसलाई यी आधुनिक र डिजिटल समयमा पनि शीर्ष मुद्रण शैलीहरू मध्ये एकको रूपमा सिमेन्ट गर्नेछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, लेटरप्रेस प्रिन्टिङ विशेष उपकरणहरू र मेसिनहरू प्रयोग गरेर गरिन्छ, परिणाम अझै पनि तिनीहरूमा एक कारीगर र हस्तशिल्प प्रभाव बोक्छ, जुन सम्भवतः लेटरप्रेस कुनै पनि समय चाँडै नहराउनुको कारण हो।
पत्र मुद्रण: यो कसरी काम गर्छ?
मुद्रण एक नाजुक कला रूप हो, आज पनि आधुनिक उपकरणहरु संग। तर विशेष गरी लेटरप्रेसको साथ, यो अझ स्पष्ट छ!
केवल एउटा प्रिन्ट सिर्जना गर्न, सबै सामग्रीहरू3चरणहरू मार्फत जानुपर्छ:
रचना - यो कहाँ छ Print Peppermint टोलीले सावधानीपूर्वक राख्छ
एक प्रकारको ग्यालेरीमा इच्छित पाठ। प्रत्येक फारमलाई अक्षरद्वारा अक्षर, र रेखाद्वारा रेखा राखिएको हुनुपर्छ, त्यसैले यसमा धेरै परिशुद्धता र हाम्रो टोलीको सबै ध्यान समावेश छ;
थोपना - यसले इच्छित मुद्रण प्रभाव प्राप्त गर्न पृष्ठहरूलाई तिनीहरूको सबैभन्दा इष्टतम स्थितिमा सेट गर्न समावेश गर्दछ। फेरि, यो एउटा कुरा हो जसमा धेरै परिशुद्धता समावेश छ, र लेटरप्रेस प्रिन्टिङ ग्राहकले अपेक्षा गरे अनुसार हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कागजलाई ध्यानपूर्वक राख्नुपर्छ।
मुद्रण - यो जहाँ मसी टाइपमा लागू हुन्छ र छाप सिर्जना गर्न प्रेस मार्फत चल्छ। मसी कागजमा थिचिएको छ, र डिजाइन अनिवार्य रूपमा पूरा भयो।
यो Print Peppermint टोली विश्वास गर्छ कि सबै मुद्रण एक कला रूप हो, तर हामी लेटरप्रेस प्रिन्टिङ को लागी हाम्रो अभ्यास को हाम्रो प्रेम लाई साँच्चै मार्गदर्शन गर्छौं।
र यो समर्पण र विवरणमा ध्यान हाम्रो लेटरप्रेस मुद्रित सामग्रीको गुणस्तरमा देखिन्छ। कुनै पनि अवसर वा प्रिन्टको प्रकार तपाईले चाहानुहुन्छ, नतिजा सधैं तपाईको अपेक्षाहरूमा बढ्नेछ!
यदि तपाइँ हाम्रो डिजाइनहरू ब्राउज गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, हाम्रो क्याटलग ब्राउज गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् यहाँ!
के आधुनिक लेटरप्रेसले अझै पनि प्राचीन प्रिन्टिङ प्रेस प्रयोग गर्छ?
प्राचीन प्रिन्ट प्रेसहरू आज पनि केही सेटिङहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, तर प्रायः मुद्रण सेवाहरूले प्रक्रियामा मद्दत गर्न आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्नेछन्। यद्यपि, आधुनिक प्रिन्ट प्रेसहरू अझै पनि प्रक्रियाको परम्परागत आधारभूत कुराहरूमा भर पर्छन्, जसले उत्कृष्ट कला र शिल्प कौशलको आश्चर्यजनक वातावरणलाई अन्तिम परिणाम दिन्छ।
अझै, मा Print Peppermint, हामी विश्वास गर्छौं कि क्लासिक्स एक कारण को लागी यति लामो समय को लागी छ। यसैले हामी हाम्रा सबै लेटरप्रेस सेवाहरूको लागि पुरानो हेडलबर्ग विन्डमिल लेटरप्रेस मेसिन प्रयोग गर्छौं, यस प्रविधिले प्रस्ताव गरेको उत्कृष्टलाई मूर्त रूप दिन।
सामान्यतया, हामी हाम्रा सबै प्रिन्टिङ उत्पादनहरू तपाईंले तिनीहरूलाई कल्पना गर्ने तरिकाबाट बाहिर निस्कन सुनिश्चित गर्न उद्योगले प्रस्ताव गर्ने उत्तम उपकरण र सामग्रीहरूमा मात्र भर पर्छ!
पुरानो शैलीको प्रिन्टर र लेटरप्रेसका फाइदाहरू
यदि तपाईं अझै पनि निश्चित हुनुहुन्न कि लेटरप्रेस शैली तपाईंको लागि हो भने, यहाँ यस शैलीका केही अचम्मका फाइदाहरू छन् जुन तपाइँलाई तपाइँको अर्को मुद्रण परियोजनाको लागि प्रयोग गर्न मनाउन सक्छ:
यो "कम छ धेरै" को प्रतीक हो - प्रिन्टिङको प्रभावको कारणले गर्दा, लेटरप्रेसले सबैभन्दा राम्रो र न्यूनतम डिजाइनको साथ पनि बोल्ड छाप (पन उद्देश्य) बनाउन सक्छ! तपाईंले आफ्नो सामग्रीहरू बाहिर खडा छ भनी सुनिश्चित गर्न धेरै काम गर्नुपर्दैन। यो मुद्रण विधि यो हुनेछ ग्यारेन्टी;
तपाईं विभिन्न प्रकारका कागजहरूमा छाप्न सक्नुहुन्छ - कागजको बोरिंग सेतो टुक्राको बारेमा बिर्सनुहोस्। लेटरप्रेस प्रिन्टिङ प्रविधिले तपाइँलाई तपाइँको कागज छनोटहरु संग अधिक रचनात्मक हुन अनुमति दिन्छ, र तपाइँको सामग्री को स्पर्श अनुभव लाई पनि बृद्धि गर्दछ;
नतिजाहरूमा तिनीहरूको लागि एक अद्वितीय अपील छ - यदि तपाईं आधुनिक मुद्रणको "बृहत् उत्पादन" प्रभावबाट बच्न चाहनुहुन्छ र थप अद्वितीय र हस्तशिल्पको लागि जानुहुन्छ भने, लेटरप्रेस प्रिन्टिङ आदर्श विकल्प हो। जबकि गुणस्तर बोर्डमा एकरूप छ, प्रत्येक प्रिन्टले एक स्टाइलिश र विलासी DIY प्रभाव सिर्जना गर्ने सूक्ष्म भिन्नताहरू बोक्नेछ;
ट्याक्टाइल प्रभाव असाधारण छ - अधिकांश मानिसहरूले मुद्रणलाई दृश्य कला मान्छन्, र यो धेरै सत्य हो। यद्यपि, लेटरप्रेस प्रविधिले प्रत्येक एकल वस्तुमा थप अनुभव प्रदान गर्दछ: स्पर्श। तपाइँ प्रत्येक अक्षरको इन्डेन्टेशन वा तपाइँको औंलाहरु संग डिजाइन को रूपरेखा ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक अद्भुत प्रभाव हुन सक्छ विशेष गरी यदि तपाईं राम्रो छाप बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै विवाह निमन्त्रणा वा व्यापार कार्ड को मामला मा;
शैलीले धेरै प्रकारका प्रिन्टहरूको लागि काम गर्दछ - लेटरप्रेस एक प्रविधि हो जुन धेरै प्रकारका प्रिन्टहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ लेटरप्रेस प्रिन्टिङको फाइदाहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाइँसँग निमन्त्रणा देखि स्टेशनरी सम्म, मितिहरू बचत गर्नुहोस्, व्यापार कार्डहरू, ह्याङ्ग ट्यागहरू, र थपको लागि यो हुन सक्छ!
Letterpress मुद्रण एक कालातीत शैली हो जुन कुनै पनि डिजाइनमा, कुनै पनि अवसरको लागि पूर्ण रूपमा थप्न सकिन्छ। र यदि तपाइँ तपाइँको सामग्रीले यो सुन्दरता र अपीलको स्पर्श बोक्न चाहनुहुन्छ भने, Print Peppermint तपाइँको प्रिन्टहरू तपाइँले तिनीहरूलाई कल्पना गरे जस्तै बाहिर आउँछ भनेर सुनिश्चित गर्न यहाँ!
हाम्रो पुरानो Heidelberg Windmill Letterpress ले लेटरप्रेस मुद्रणका सबै फाइदाहरू र थप कुराहरू पुन: सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ!
लेटरप्रेस प्लेटहरू अनुकूलन
Print Peppermint तपाईंलाई आश्चर्यजनक डिजाइनहरू सिर्जना गर्न र तपाईंको विचारहरूलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्न धेरै लेटरप्रेस टेम्प्लेटहरू उपलब्ध छन्।
यद्यपि, यदि तपाइँको दिमागमा केहि विशेष छ भने, वा तपाइँको प्रिन्टहरूमा तपाइँको लोगो थप्न चाहनुहुन्छ भने, हामी अनुकूल पत्र प्लेट मुद्रण सेवाहरू पनि प्रस्ताव गर्दछौं जसले मद्दत गर्न सक्छ।
त्यति मात्र होइन, तर हामी धेरै आकर्षक सजावटका साथ तपाईंको डिजाइनहरूमा थप तहहरू थप्न सक्छौं:
कस्टम डाइ कटिंग
सुन र अन्य 25 रंगहरूमा पन्नी मुद्रांकन
पन्नी मुद्राङ्कित किनाराहरू
ब्लाइन्ड एम्बोसिङ र डेबोसिङ
फोल्डिङ र स्कोरिङ
साथै, हाम्रो साथ ग्राफिक डिजाइन सेवाहरू भाडामा, तपाईले साँच्चै अद्वितीय र उत्कृष्ट लेटरप्रेस मुद्रण डिजाइन अनलक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको प्रकार, वा तिनीहरूको उद्देश्य!
कस्टम लेटरप्रेस कार्डहरू, निमन्त्रणाहरू, पोस्टरहरू, र थप!
Print Peppermint एक उद्योग-अग्रणी सेवा प्रदायक हो, र हामीले हाम्रो आउट-अफ-द-बक्स सोच र यस शिल्पमा समर्पणको लागि एक बलियो प्रतिष्ठा निर्माण गर्न व्यवस्थित गरेका छौं।
यदि तपाईं भरपर्दो लेटरप्रेस मुद्रण सेवाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई विभिन्न उत्पादनहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छौं:
लेटरप्रेस कार्डहरू (ग्रीटिंग कार्डहरू)
लेटरप्रेस प्रस्तुतीकरण फोल्डरहरू
हाम्रो कस्टम लेटरप्रेस प्रिन्टिङ सेवाहरूको लागि धन्यवाद, तपाईंले आफ्नो अद्वितीय लोगो, छवि, वा विचारलाई वास्तवमै स्टाइलिश तरिकामा जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग विचारहरू छैनन् भने पनि, तपाईं उत्पादन पृष्ठहरूमा सीधै आफ्नो डिजाइन सिर्जना गरेर प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ, वा तपाईंसँग Print Peppermint टोलीले तपाईंलाई केहि नयाँ गर्न मद्दत गर्दछ!
हाम्रा सेवाहरू दिमागमा धेरै विशिष्ट रचनात्मक विचारहरू भएकाहरू र तिनीहरूको डिजाइनको लागि थोरै प्रेरणा चाहिनेहरूका लागि उपयुक्त छन्। तपाईंले आफूलाई कुन पक्षमा भेट्टाउनुभए पनि, हामीलाई सिधै पुग्न र तपाईंको परियोजनामा ​​नि: शुल्क उद्धरण प्राप्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
एम्बोसिङ बनाम लेटरप्रेस: ​​के फरक छ?
धेरै प्रिन्टिङ शैलीहरू उपलब्ध भएकाले, विवरणहरूमा हराउन र तिनीहरूमध्ये केहीलाई भ्रमित गर्न सजिलो हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले पहिले एम्बोसिङ प्रिन्टिङको बारेमा सुन्नुभएको छ भने, तपाईं अब आफैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ:
एम्बोसिङ र लेटरप्रेस बीच के भिन्नता छ?
छोटो जवाफ मसी हो।
इम्बोसिङ र डिबोसिङ दुई प्रिन्टिङ शैलीहरू हुन् जसले मसी बिना कागजमा छाप सिर्जना गर्न ताप र दबाब प्लेटहरू प्रयोग गर्दछ। इम्बोसिङले उठेको प्रभाव सिर्जना गर्छ, जबकि डिबोसिङले कागजलाई तल थिच्छ।
यी दुई शैलीहरूले डिजाइनमा अद्भुत सूक्ष्म स्पर्श थप्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले आफ्नो लोगोलाई डिजाइनमा थप्नको लागि इम्बोसिङ र डिबोसिङ विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक रूपमा आफ्नो प्रिन्टलाई भीडभाड नगरी। फोकल पोइन्ट मुख्य डिजाइन हो, जबकि एम्बोसिङ वा डिबोसिङले अर्को तह थप्छ जसले सबैलाई सँगै ल्याउँछ।
थप रूपमा, लेटरप्रेस र एम्बोसिङलाई साँच्चै विशेष डिजाइन बनाउनको लागि सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं थप विचारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Print Peppermint प्रस्ताव किफायती डिजाइन सेवाहरू। हाम्रो विशेषज्ञता र सृजनात्मक प्रकृति प्रयोग गर्नुहोस् डिजाइनमा पहुँच गर्नको लागि जुन तपाइँलाई T मा उपयुक्त हुनेछ!
पुरानो स्ट्याम्पिङ मेसिन: तपाईंको छाप्न अर्को तह थप्नुहोस्
यदि तपाइँ एम्बोसिङ, डिबोसिङ, वा परम्परागत लेटरप्रेस बीचको निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने, जान्नुहोस् कि तपाइँलाई आवश्यक नहुन सक्छ!
हाम्रो "पुरानो स्ट्याम्पिङ मेसिन" ले तपाईले चाहानु भएको उत्तम एम्बोसिङ वा डिबोसिङ लुक सिर्जना गर्न सक्छ, जबकि हाम्रो पुरानो हेडलबर्ग विन्डमिल लेटरप्रेसले क्लासिक लेटरप्रेस टच थप्नेछ।
यो Print Peppermint डिजाइन टोलीले तपाईंलाई विभिन्न उद्देश्यका लागि काम गर्ने सन्तुलित र भिजुअल रूपमा आकर्षक लुक सिर्जना गर्न यी दुई प्रिन्टिङ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छ:
नेटवर्किङ घटनामा बलियो छाप बनाउनुहोस्
तपाईंको विवाह वा कार्यक्रम अतिथिहरूलाई अनौठो कुराको साथ आश्चर्यचकित गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायको लागि तपाईंको ब्रान्डिङ प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्
बोल्ड प्रभाव पार्न सक्ने कुनै चीजको साथ तपाइँका प्रस्तावहरूलाई प्रचार गर्नुहोस्
जाँच गरेर प्रेरणा प्राप्त गर्नुहोस् लेटरप्रेस मुद्रण सेवाहरू कि Print Peppermint प्रस्ताव छ!
थिचिएको मसीका प्रकारहरू
हामी हाम्रो लेटरप्रेस मुद्रण सेवाहरूको लागि 25 भन्दा बढी विभिन्न रंगहरू प्रस्ताव गर्दछौं। त्यति मात्र होइन, तर हाम्रो प्रविधिको कारणले गर्दा, तपाईंले छान्नुभएको कुनै पनि रङ कागजमा पूर्ण रूपमा थिचिनेछ भनी तपाईं ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ।
Print Peppermint मात्र प्रयोग गर्दछ Pantone PMS मसी रङहरू, उद्योगले प्रस्ताव गरेको उत्कृष्ट मध्ये एक। टोलीले प्रत्येक मसी रङको सटीक थिच्ने सुनिश्चित गर्न र तपाइँको पाठ वा डिजाइन प्रत्येक पटक पूर्ण रूपमा बाहिर आउँछ भनेर सुनिश्चित गर्न एक पटकमा 1 रङ लोड गर्दछ।
यदि तपाइँ एकल रङ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वा थप रचनात्मक र मिक्स एण्ड मिलाउन चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो टोलीले उही प्रक्रिया प्रयोग गर्नेछ।
थप रूपमा, तपाइँको रङ छनौटहरू पप गर्न मद्दत गर्न, हामी विश्वका केही उत्कृष्ट विक्रेताहरूबाट विलासी 100% कपासका कागजहरूमा सबै कुरा प्रिन्ट गर्छौं:
Crane & सह
किन लेटरप्रेस प्रिन्टिङ सेवाहरू मा Print Peppermint तपाईको शीर्ष छनोट हो
Print Peppermint 2010 देखि उद्योगमा छ, र वर्षौंको दौडान हामीले मुद्रण कलाको लागि हाम्रो माया र प्रशंसा बढाएका छौं।
हाम्रो लेटरप्रेस प्रिन्टिङ सेवाहरूको हाम्रो हृदयमा विशेष स्थान छ। हुनसक्छ नियमित प्रिन्टिङ भन्दा पनि, त्यहाँ सम्पूर्ण प्रक्रियासँग धेरै व्यक्तिगत सम्बन्ध छ र हामीले छाप्ने प्रत्येक व्यापार कार्ड, पोस्टर, वा अन्य सामग्रीसँग परीक्षणमा हाम्रो ध्यान साँच्चै राख्छ।
यहाँ छ किन तपाईंले सधैं छनौट गर्नुपर्छ Print Peppermint तपाइँको सबै प्रिन्ट आवश्यकताहरु को लागी:
हामी तपाईंको लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्ने र तपाईंसँग हाम्रो विशेषज्ञता साझा गर्ने लक्ष्य राख्छौं
तपाईले सधैं तपाईले चाहानु भएको परिणामहरू प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न हामी असाधारण ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछौं
हामी इमानदार छौं र तपाईलाई आफ्नो डिजाइनहरू सुधार गर्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौं
हामी एक जीवन्त र रचनात्मक टोली हौं
हामी तपाईंको फाइदाको लागि, किफायती मुद्रण सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछौं
यदि तपाईं आफ्नो लेटरप्रेस प्रिन्टहरू प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ भने Print Peppermint, आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई आफ्नो परियोजना बारे थप बताउन र अनुकूलन उद्धरण प्राप्त गर्न!
लेटरप्रेस प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
केहि प्रेरणा चाहिन्छ? हाम्रो डिजाइन ब्लग जाँच गर्नुहोस् जहाँ हामी प्रिन्टको संसारमा नयाँ र रोमाञ्चक डिजाइन प्रचलनहरूमा उद्यमी हुनुको अर्थ के हो भन्ने सबै प्रकारका विषयहरू समाधान गर्छौं।
आफ्नो प्रेरणा खोज्नुहोस् >
Peppermint + Botvidsson उत्पादन फोटोग्राफी ट्यूटोरियल सहयोग
साना कागज वस्तुहरू कसरी फोटोग्राफ गर्ने र बनावट र विवरणहरू खिच्ने भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ? खैर... हाम्रो उत्पादन फोटोग्राफी नायक मार्टिन बोटभिडसनले हामीले भर्खरै उसको लागि छापेका नयाँ लेटरप्रेस व्यवसाय कार्डहरू जस्ता साना कागजका वस्तुहरू कसरी खिच्ने भन्ने बारे ट्यूटोरियल बनाए। यदि तपाइँ एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर हुनुहुन्छ भने, आफैलाई एक पक्ष दिनुहोस् र यो केटालाई जाँच गर्नुहोस् ... थप पढ्नुहोस्
संसारमा लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्कृष्ट कागजातहरू!
छवि क्रेडिटहरू: steelpetalpress.com लेटरप्रेस मुद्रण दशकौंदेखि भइरहेको छ। यो छाप्ने शैली हो जसमा कागज, कपडा, वा कुनै अन्य सामग्रीको पानामा छाप सिर्जना गर्न उठाइएको प्रकार प्रयोग गरिन्छ। यसले बाक्लो र पातलो बनावटको साथ पाठको प्रभाव दिन्छ जसले यसको डिजाइनमा गहिराइ थप्छ ... थप पढ्नुहोस्
लेटरप्रेस डिजाइन: for सफलताको लागि सुझावहरू
सब भन्दा नाजुक कला कोरेजस्तै, एक लेटरप्रेस डिजाईन गर्न विस्तृत मा सावधानीपूर्वक ध्यान आवश्यक छ। तपाईंले विशिष्ट इनकि match र ग्राफिक विषयवस्तुहरूका पत्रहरू मेल खानको लागि डिजाईन टेलर गर्नुपर्छ। लेटरप्रेस एक पुरातन कला रूप हो जसको जरा १ the औं शताब्दीमा देखिन्छ। जे होस् प्रारम्भमा धातु र काठको खोतले सीमित छ, ... थप पढ्नुहोस्
17 घण्टा अघि
FAQs - लेटरप्रेस प्रिन्टिङ
लेटरप्रेस प्रिन्टिंगका लागि गाईड: यो के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
लेटरप्रेस प्रिन्टिङ गाइड स्रोत: डिजाइन शैक लेटरप्रेस प्रिन्टिङ एक कलाकृति हो जुन 1450 देखि चलिआएको छ। यसको सिर्जनाको श्रेय एक जर्मन सुनार, जोहानेस गुटेनबर्गलाई जान्छ। राहत मुद्रण वा टाइपोग्राफिक मुद्रणको रूपमा पनि चिनिन्छ, लेटरप्रेस एक कलाकृति भन्दा बढी छ; यो एक परम्परा हो। संसारका विभिन्न भागहरूले विधि, प्रविधिहरूमा योगदान दिएका छन् ... थप पढ्नुहोस्
प्लेटेन लेटरप्रेस मेसिन कसरी तयार गर्ने
प्रेस र छाप्ने फारम तयार गर्नु प्रेसम्यानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। प्रक्रियाले छाप समायोजन गर्ने समावेश गर्दछ ताकि फारमका सबै भागहरू फर्म, दबाबको साथ छापिनेछन्। मेकरेडीको सिद्धान्त सबै प्रकारका प्रिन्टिङ प्रेसका लागि समान छ, खुला… थप पढ्नुहोस्
लेटरप्रेस प्रिन्टिंग के हो र यो किन खराब हो?
लेटरप्रेस प्रिन्टिङले राहत मुद्रण पाठ र छविहरूलाई बुझाउँछ, जहाँ ह्यान्डसेट काठ वा धातुको प्रकार रबर स्ट्याम्प जस्तै उठेको सतहमा छापिएको हुन्छ। 1440 मा लेटरप्रेसको आविष्कारको श्रेय जोहानेस गुटेनबर्गलाई दिइन्छ, तर यो वास्तवमा त्यो भन्दा धेरै पहिले भएको थियो। वास्तवमा, चल प्रकारबाट मुद्रण ... थप पढ्नुहोस्
लेटरप्रेस प्रिन्टि so यति महँगो किन छ?
लेटरप्रेस प्रिन्टिङ एक कठिन प्रक्रिया हो - व्यक्तिगत प्रकारका ब्लकहरू प्रयोग गरेर तपाईंको डिजाइनहरू व्यवस्थित गर्नदेखि, मसी र छाप्ने चरणसम्म। यसमा उपकरण र शिल्प कौशलको एक निश्चित स्तर समावेश छ जुन धेरै प्रिन्टरहरूसँग हुँदैन। यो हस्तनिर्मित भएकोले, लेटरप्रेसले नियन्त्रण र अनुकूलनलाई अनुमति दिन्छ जब यो राम्रो टाइपोग्राफीमा आउँछ। तपाईले के पाउनुहुन्छ… थप पढ्नुहोस्
मैले प्रयोग गर्नु पर्ने सबैभन्दा सानो फन्ट साइज के हो?
जब तपाईं आफ्नो मुद्रण कार्यको लागि फन्ट साइज खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो लागि काम गर्न विचार गर्न आवश्यक छ। यी कारकहरूमा फन्ट शैली, रेखाको वजन, मुद्रण प्रक्रिया, स्पष्टता, र आकार समावेश छ। यस लेखमा, हामी मार्फत जानेछौं ... थप पढ्नुहोस्
तपाइँ कस्तो प्रकारको कालो कागजातहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
कालो व्यापार कार्डहरू नेत्रहीन रूपमा आश्चर्यजनक छन्। कालो कागजको धनी, विलासी लुक र बनावटले लोगो, ढाँचा, र पन्नी वा एम्बोसिङ उपचारलाई फरक बनाउँछ। यदि तपाइँ अनुकूलन कालो कागजहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी एक विशिष्ट उद्धरण छलफल गर्न सक्छौं र यसलाई तपाइँको लागि अर्डर गर्न सक्छौं। हामीसँग हाम्रो मानक संग्रह पनि छ जसमा समावेश छ: अनकोटेड रिच ... थप पढ्नुहोस्
कागज आधार वजन र मोटाई @ मा मार्गदर्शन Print Peppermint
तपाईलाई हस्तान्तरण गरिएको सबैभन्दा राम्रो व्यापार कार्ड बारे सोच्नुहोस्। हेर्दा कस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो ? के यो भारी, घना, वा लचिलो थियो? ग्राफिक डिजाइन पक्कै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब यो व्यापार कार्डहरू सिर्जना गर्न आउँछ, तर यो विचार गर्ने मात्र कुरा होइन। कागज आधार वजन र मोटाई संग कम गर्न को लागी छ ... थप पढ्नुहोस्
तपाईंले मन पराउने थप सामग्री
कलाकार व्यवसाय कार्डहरू
स्वत: विस्तार व्यवसाय कार्ड
बेकरी व्यवसाय कार्डहरू
नाई व्यापार कार्डहरू
कालो ब्यापार कार्ड
बुटिक व्यापार कार्डहरू
व्यापार कार्ड टेम्पलेट्स
र by्ग द्वारा व्यवसाय कार्ड
कागज द्वारा व्यवसाय कार्ड
मूल्य र गुणस्तर द्वारा व्यापार कार्ड
व्यवसाय द्वारा व्यवसाय कार्ड
आकार द्वारा व्यापार कार्ड
शैली द्वारा व्यवसाय कार्ड
कार धुने व्यापार कार्ड
खानपान व्यवसाय कार्ड
व्यवसाय कार्डहरू सफा गर्दै
कपडा र झोला
रंगीन बिजनेस कार्ड
निर्माण व्यवसाय कार्डहरू
टेम्प्लेट डिजाइन गर्नुहोस्
Dj व्यापार कार्ड
इलेक्ट्रीशियन व्यापार कार्डहरू
एस्थेटिशियन व्यापार कार्डहरू
ग्राफिक डिजाइन व्यवसाय कार्डहरू
कपाल र कपाल स्टाइलिस्ट व्यापार कार्ड
Handyman व्यापार कार्डहरू
ह्या Hang ट्यागहरू
HVAC व्यापार कार्डहरू
संयुक्त रोलि ((हेम्प)
Keller विलियम्स व्यापार कार्ड
ल्याण्डस्केपि Business व्यापार कार्डहरू
लॉन केयर व्यवसाय कार्डहरू
वकील व्यवसाय कार्ड
लेटरप्रेस नमूनाहरू, उदाहरणहरू, र विचारहरू
मेकअप कलाकार व्यवसाय कार्ड
मसाज थेरापी व्यापार कार्डहरू
मेकानिक व्यापार कार्डहरू
धातुजन्य पन्नी व्यवसाय कार्डहरू
नेलहरू व्यवसाय कार्डहरू
नोटरी व्यापार कार्डहरू
प्याकेजि T टेप
चित्रकारी व्यवसाय कार्डहरू
पापाराजी व्यवसाय कार्डहरू
व्यक्तिगत व्यापार कार्ड
व्यक्तिगत ट्रेनर व्यापार कार्डहरू
फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड
प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू
दबाव धुने व्यापार कार्ड
घर जग्गा व्यापार कार्ड
रेस्टुरेन्ट व्यवसाय कार्ड
छत व्यवसाय कार्ड
मिति बचत गर्नुहोस्
आकार ब्यवसाय कार्ड
चिन्ह र पोस्टर
सामाजिक मिडिया व्यापार कार्ड
स्टिकर र लेबलहरू
बाक्लो व्यापार कार्ड
विवाह निमन्त्रणा नमूनाहरू, उदाहरणहरू, र विचारहरू
वेल्डिंग व्यापार कार्डहरू
काठ व्यवसाय कार्ड